10 နေ့ရက်များခရီးစဉ်များတွင် Bavaria ဂျာမဏီ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 နေ့ရက်များခရီးစဉ်များတွင် Bavaria ဂျာမဏီ
သင်ရုံဂျာမနီမှာ Bavaria မှတဆင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်စတင်ခဲ့ကြလျှင်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေကြတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိအံ့သြဖွယ်များသက်သက်နံပါတ်လွှမ်းလျက်ရှိသည် လည်ပတ်ရန်နေရာများ. Plus အား, သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးမှာသူတို့ကို fit ချင် 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်း.
Bavaria ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှအများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်အချို့သောအဘို့ဖြစ်၏. သငျသညျ Bavaria အတွက်ခမ်းနားမြို့ကြီးများ၏အလွန်ကြီးစွာသောအရေအတွက်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ကဲ့သို့ မြူးနစ်, ဥပမာ. သင်တို့သည်လည်းကြီးမားတဲ့အပေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ဘာသာစကား Bavarian ဘီယာလမ်းကြောင်း သငျသညျဘီယာတစ်ကျွမ်းကျင်သူလျှင်.
ငါတို့သည်သင်တို့ Bavaria များအတွက်အသေးစိတ်ခရီးစဉ်အားငါပေးမည်, သငျတို့သလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အားလုံးကြောင့်နောက်ကိုလိုက်ကာအံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်! ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ယူပါစေ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသည်အများစုကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ Way ကိုရန်ခရီးသွား. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ Started Get ခင်မှာသင်ဟာသိအဘယ်အရာလိုအပ် Do 10 နေ့ခရီးစဉ်များတွင် Bavaria?
Bavaria ကြီးမားတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်သင်အလွယ်တကူအထဲတွင်ရက်သတ္တပတ်သုံးဖြုန်းနိုင်. သငျသညျအကြီးအသေးစိတျထဲမှာအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်ကောင်းလိုအပ်.
သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးအဘို့အသွားလျှင် 10 တစ်နေ့တာခရီးစဉ်, ထို့နောက်အချို့ကိုသင်အမှုအရာထွက်ခုတ်ဖြတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. ပိုကဘာလဲ, ဒါဟာသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် မီးရထားကနေတဆင့်. သင်လုပ်ဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ရှိသမျှသောအရပ်မှမရနိုင်ပါလိမ့်မည်. ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, သငျသညျ သာ. ကွီးမွတျအမြင်များ Bavaria ကမ်းလှမ်းမှုသက်သေခံဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်.
ထို့အပွငျ, ရထားမသွား Bavaria မှတဆင့်အလွန်လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်. လက်မှတ်တွေစျေးပေါများမှာ, သင်ပြည်နယ်တိုင်းထောင့်သို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်.
အဆုံးမှာ, Bavaria သွားရောက်တဲ့အခါသင်သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါအဆသင့်ရဲ့ 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းသင့်ပါတယ်ရက်ပေါင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုစက်တင်ဘာကနေအောက်တိုဘာလမှဖြစ်ကြသည်. သငျသညျလူအစုအဝေးကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်, သငျတို့သလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် Oktoberfest.
Bavaria ခရီးစဉ် Day ကို 1 နှင့် 2: မြူးနစ်
Bavaria သွားသည့်အခါ, သငျသညျမြူးနစ်နှင့်အတူစတင်ရန်ရှိသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဒါကြောင့်လက်လှမ်းမမီရန်လွယ်ကူသည်, သငျသညျဥရောပ၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာနေပါစေ. သင်လုပ်နိုင်သည် ရထားယူ နီးပါးဘယ်နေရာကနေမဆိုနှင့်မြူးနစ်ကိုရောက်ရှိ. သို့မဟုတ်, သငျသညျဝေးတစ်နေရာရာကနေလာမယ့်လျှင်, သငျသညျပျံသန်းနိုင်သည်. မြူးနစ် Bavaria အတွက်အကြီးမားဆုံးမြို့ဖြစ်၏, နှင့်လေယာဉ်ကမ္ဘာအနှံ့အများအပြားမြို့ကြီးများကနေပျံသန်း. မလိုလျှင်, သင်အလွယ်တကူထို့နောက်အခြားအဓိကမြို့သို့ပျံသန်းနှင့်ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြူးနစ်သွား.
Plus အား, ငါတို့အားတစုံတခုသောကြောင့်မမေ့လျော့ပါစေ 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်းမြူးနစ်မပါဘဲပြည့်စုံမဖွစျနိုငျ. သငျသညျခြောဤမြို့ကိုတဲ့မှော်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် အလည်အပတ်ဖို့ရာအရပျ. အဆိုပါရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နာရီမျှော်စင်ကနေအင်္ဂလိပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရန်, သငျသညျအလည်အပတ်ခရီးနေရာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တာအဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ဗဟိုအတွက်နေထိုင်ရန်သင့်အားအကြံပေး. ဒါကလမ်း, သငျသညျခြေလျင်အရာအားလုံးရနိုင်ပါလိမ့်မည်.
တစ်နေ့တာ၏အဆုံးအားဖြင့် 2, သင် ... သင့်တယ် သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုး နှင့် Berchtesgaden မြို့ကိုသွား.
3 နှင့် 4: Berchtesgaden နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားဥယျာဉ်
Berchtesgaden Bavaria ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွင်တည်ရှိသည်. ဒါဟာသြစတြီးယားနှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်ပြည်မှသေးငယ်တဲ့အိတ်ကပ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအလှဆုံးတှေ့လိမျ့မညျ အမျိုးသားဥယျာဉ် ဒီဧရိယာ၌ဂျာမနီရှိ. Plus အား, သငျသညျမြားကိုလညျး Berchtesgaden ၏မှော်မြို့အချို့အချိန်ဖြုန်းရဦးမည်.
အဆုံးမှာ, သငျသညျရေကန် Konigsee နှင့်လင်းယုန်သိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြမည်. ရေကန် Konigsee ဂျာမနီမှာအမြင့်ဆုံးရေကန်ဖြစ်ပြီးခမ်းနားတောင်များဝိုင်းရံနေသည်. လင်းယုန်သိုက်သည်, အားလုံးသမိုင်းကြောင်းရိုက်ကူးခြင်းကြောင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ခစျြလိမျ့မညျ, ဒါကြောင့်နာဇီများ၏ command ကို post ကိုဖြစ်သကဲ့သို့.
သငျသညျအမှုအရာထရောထွေးချင်လျှင်, သငျသညျမြားကိုလညျး Salzburg ကိုသွားနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါမြို့နယ်စပ်နီးစပ်သည်နှင့် Berchtesgaden, ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် Salzburg မှအညီအမျှမှော်!
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် Berchtesgaden အတွက်ညစာအတူသင်၏အံ့ဘွယ်သောနေ့ကအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်. ညဉ့်ကိုဖြုန်းပြီးနောက်, သငျသညျနေ့၌လာမည့် destination သို့ပေါ်တွင်ရွှေ့နိုင်ပါတယ် 5.
Berchtesgaden မှ Salzburg
Berchtesgaden မှ Linz
Berchtesgaden မှ Innsbruck ရှိ
Bavaria ခရီးစဉ်နေ့ရက်များ 5, 6, နှင့် 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, ထိုအ Neuschwanstein ရဲတိုက်
သင့်ရဲ့အပေါ်နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း 10 ခရီးစဉ် Bavaria အတွက်အများဆုံးအချို့လည်းပါဝင်သည်ရက်ပေါင်း ပါသောနေရာများ ဂျာမနီမှာ. တစ်ရက်ပြီးတာနဲ့5စတင်, သင် ... သင့်တယ် Garmisch Partenkirchen မှရထားပေါ်တွင်-hop.
နေ့ 5: အခြေချခြင်းနှင့်မြို့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု.
နေ့ 6: ယင်းမှော်သို့သွားရန် Neuschwanstein ရဲတိုက်. သငျသညျကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးအထင်ကရရဲတိုက်တစ်ဦးအဖြစ်သိ. ထိုသို့အနေနဲ့စစ်မှန်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်နှင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် အဆိုပါဒစ္စရဲတိုက်မှုတ်သွင်း.
နေ့ 7: Zugspitze များ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့သွားရောက်, မျှမျှတတအနီးကပ်မြို့မှအရာဖြစ်ပါသည်. ဤတွင်သင်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏အကောင်းဆုံးအမြင်များ၏တဦးတည်းရနိုင်. အချို့လူများကတိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကကေဘယ်လ်ကားယူရန်သင့်အားအကြံပေး.
ဒါဟာသင့်ရဲ့ခရီး၏အရှည်ကြာဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် Boot တက်မှအရေးပါသောတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်. နေ့ရက်တွင် 8, သင်လုပ်နိုင်သည် Rothenburg မှအပေါ်ကိုရွှေ့.
8: Rothenburg ခရီးစဉ်များတွင် Bavaria
နေ့ 8 တစ်ဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည် ရှည်လျားသောမီးရထားစီးနင်း ပြီးနောက် ရောင်စုံမြို့ Rothenburg ob der Tauber ၏. သင့်အနေဖြင့်စီးနင်းရှည်လျားကြောင်းစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ, သင်ဤပုံမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်များများရပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအလွန်သေးငယ်သည်, နှင့်သင်တဦးတည်းနေ့လည်ကတွေ့နိုင်ပါသည်.
ထိုနေ့၏အဆုံးအားဖြင့်, သင် Schneeballen အပေါ်စားသောက်နိုင်ပါတယ်. မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျညဉ့်နေဖို့နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်နောက်တစ်နေ့ destination သို့ပေါ်တွင်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်: Nuremberg သို့မဟုတ် Wurzburg.
Bavaria ခရီးစဉ်နေ့ရက်များ9နှင့် 10: Nuremberg ဒါမှမဟုတ် Wurzburg
Nuremberg Bavaria ၏ပြည်နယ်ဒုတိယအကြီးမားဆုံးမြို့ဖြစ်၏. သင့်အတွက် လည်ပတ်သင့်သော နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်း. သို့သျောလညျး, မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်, သင်အမြဲ Wurzburg ကပြောင်းနိုင်သည်. နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများအတော်လေးနီးစပ်အချင်းချင်းဖြစ်ကြပြီး Rothenburg, ဒီတော့ခရီးသွားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွယ်ကူသောဖွစျလိမျ့မညျ.
နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများမှော်ဖြစ်ကြပြီးအလယ်ခေတ်သမိုင်းနှင့်ရဲတိုက်နှင့်ပြည့်စုံ. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်တဦးတည်းကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဆုံးဖြတ်မှတက်သည်သင်တကယ်ကိုဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်, အဲဒီမှာက. သင့်ရဲ့ 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်း, ဂျာမနီ. ကျနော်တို့ဥရောပ၏ဤခမ်းနားဒေသတွင်း၌ရှိသမျှသောအရေးကြီးသောမှတ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်သေချာလုပ်. ငါတို့သည်လည်းအမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားပြီးအပေါငျးတို့သမှော်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ရထားနဲ့သူတို့အားလုံးကိုလက်လှမ်းမှီဖို့ဘယ်လိုထည့်သွင်းခဲ့ကြ.
သငျသညျခရီးစဉ်များတွင် Bavaria အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်, အခမဲ့ခံစားရ အဆက်အသွယ်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “တစ်ဦးက 10 နေ့ခရီးစဉ်များတွင် Bavaria ဂျာမဏီ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)